Glu HCY UA LDL-C - Chisingaperi Zvirwere Kuongorora Rapid Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
Glu HCY UA LDL-C - Chisingaperi Zvirwere Kuongorora Rapid Reagent Kit
Nyore kushanda, zvakazara otomatiki,
[email inodzivirirwa] Iyo Glucose / Homocysteine ​​/ Uric Acid / Yakadzika Dhivhosi Lipoprotein Cholesterol Reagent kit inoitirwa kuyera huwandu hweglucose (Glu), homocysteine ​​(HCY), uric acid (UA) uye yakaderera density lipoprotein cholesterol (LDL-C) muvanhu serum . Kiriniki, inonyanya kushandiswa kuongorora huwandu hweropa glucose, kuongororwa kwekubatsira kwehyperhomocysteinemia, hyperuricemia, hypercholesteremia, coronary heart disease, atherosclerosis uye kuongororwa kwenjodzi yezvirwere zvemoyo.
Iko kusungirirwa kweglucose muserum inoratidza chimiro cheglycemic control mune chaiyo-nguva. Kudzora kwakasimba kweropa glucose level kwakakosha mukudzivirira uye kurapwa kweropa glucose kusagadzikana senge chirwere cheshuga.
Homocysteine ​​ndeimwe yenjodzi dzakazvimirira dzekukudziridza sitiroko, coronary arteriosclerosis uye myocardial infarction, uko kwakakwira huwandu hwehomocysteine ​​hunowedzera mukana wekukura kwezvirwere. Zvichakadaro, zvinoenderana nehunhu hwayo hwemetabolism, homocysteine ​​kusungwa zvakare chiratidzo chinonzwisisika chevhitamin B12 kushomeka uye kushomeka kwefolic acid.
UA ndicho chigadzirwa chekupedzisira chekuparara kwemetabolism, uye inosvinwa kunze kwemuviri wemunhu kuburikidza neitsvo uye neweti. Mune zvakajairika mamiriro, iyo uric acid mwero mumuviri wemunhu iri mune ine simba equilibrium. Yakakwidziridzwa uric acid nhanho inowanzoonekwa kune varwere vane chirwere cheitsvo. Nekudaro, kuyerwa kweUA kunoshandiswa semubatsiro mukuongororwa kwekutanga-nhanho kukuvara kwetsvo.
Yakaderera density lipoprotein cholesterol inogona kuratidza iwo mwero weakaderera density lipoprotein, inozivikanwawo seatherogenic factor. Chiyero chepamusoro che low low density lipoprotein cholesterol pakati yakazara cholesterol inoratidzira yakawedzera njodzi ye atherosclerosis. Chiyero chaicho chepasi density lipoprotein cholesterol yakakosha mukudzivirira kwekutanga, kuongororwa, kurapwa uye kurapa kwecoronary chirwere chemoyo, uye ndiyo yakakosha mareferenzi ekumisikidzwa kwemushonga kune varwere vehyperlipoproteinemia.
Mhedzisiro inowanikwa mune 12 maminetsi